खुल्ला सीमाः क्रस बोर्डर आतंकलाई रोक्न बलियो काँडेतारको आवश्यक – मुलधार न्युज
Home > प्रशासन > खुल्ला सीमाः क्रस बोर्डर आतंकलाई रोक्न बलियो काँडेतारको आवश्यक
२१ भाद्र २०७५, बिहीबार ०८:१४
काठमाडौं-ललितपुर अन्तराष्ट्रिय कूटनीतिका जानकार तथा सीमाविद्हरुले नेपालले आफ्नो सीमामा कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ललितपुरमा बुधवार भएको कार्यक्रमका सहभागिहरुले सरकारले भारत र चीनसँगको सीमामा कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
स्वतन्त्र युवा प्रजातान्त्रिक संघ, नेपालले गरेको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नियमन, खुल्ला सीमाना, अवसर र चुनौती, विषयक गोष्ठीमा वक्ताहरुले त्यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले खुला सीमाना नेपालका लागि अवसर र चुनौती दुवै भएको बताए। उनले नेपाल भारत सीमानामा काँडेतार लगाउनुपर्ने र मान्छे वारपार गर्नका लागि निश्चित नाका बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। खुला सीमानालाई अपराधीहरूले हदैसम्म दुरुपयोग गरेका कारण पनि क्रस बोर्डर आतंक बढेको उनको भनाई छ। उनले एक देशमा अपराध गर्ने र अर्को देशमा लुक्ने प्रवृति मौलाएको बताए।
भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले नेपालले सीमा व्यवस्थापनमा समय सापेक्ष नीति लिनुपर्ने बताए । हाम्रा गतिविधि र नीतिहरूमा पुनरावलोकन पर्ने र अध्ययन र अनुसन्धानबाट अब क्रमशः नियमनको काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका सहप्राध्यापक डा. उद्धब प्याकुरेलले नेपाल खुला सीमानाको पक्षमा उभिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले खुला सीमानाका अवसरलाई सदुपयोग गर्दै चुनौती कम गर्न राज्य संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने बताए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय परराष्ट्रमामिला अध्ययन केन्द्रकी उपनिर्देशक डा. इन्द्रकुमारी अधिकारीले खुला सीमानाका कारण नेपाललाई भन्दा भारतलाई फाइदा भइरहेको बताइन्।
उनले सीमानाबारे निर्णय लिँदा त्यहाँ बस्ने दुवैतर्फका जनताको अवस्था बुझेर निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखिन्।
कार्यक्रमका अर्का वक्ता पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्णले सीमाको समस्याको समाधान सीमा क्षेत्रबाटै खोज्न सुझाए । उनले दिल्ली र काठमाडौंमा बसेर निर्णय लिनेभन्दा पनि सीमानाका समस्या बुझेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
परराष्ट्र मामिलाका जानकार एवं ब्राजिलका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा. प्रद्धुम्नविक्रम शाहले सीमामा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै, नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी डा. उमेश भट्टराईले नेपालले आफ्नो अनुकूलता हेरेर नीति लिनुपर्ने बताए।